छोरो पाउने चल्तीका सुत्र – Etajakhabar
छोरो पाउने चल्तीका सुत्र
सुनिता पहरी – “छोरा पाउने भएर होला यसपालि उसलाई साह्रै गाह्रो भएको छ । पेटमा छोरा छ भने अति दुःख दिन्छ रे नि !”
मेरी दिदीकी साथी गर्भवती भएपछि उनलाई केहिदिनदेखि निकै गाह्रो भएको कुराले मेरी दिदीलाई पिरोलेको थियो । साथीलाई गाह्रो भएको कुरा दिदीले सुनाउँदा पेटमा छोरो भएकाले गाह्रो भएको हो भन्ने सुनेपछि मेरा कान अलि ठाडा भए ।
गर्भवती भएका बेला महिलामा विभिन्न समस्या देखिन्छन् । तर पेटमा छोरा नै भएकाले गाह्रो भएको भन्नेसुनेपछि मैले दिदीलाई सोधे “गर्भमा छोरा नै छ भनेर चाहिँ कसरी ठोकुवा गरेको ? पेटभित्र छोरी पनि त हुनसक्छ नि ।”
दिदीको सहज जवाफ थियो “होइन यसपालि पक्का छोरा हुन्छ भनेर उनैले भनेकी हुन् ।”
पेटभित्रको भ्रुणको लिंग छुट्टाउनु गैरकानुनी हो भन्ने कुरा थाहा भए झै पैसाका लागि यस्तो काम गर्ने डाक्टर पनि सजिलै उपलब्ध छन् भन्ने पनि हामी धेरैलाई थाहा छ । त्यसैले दिदीलाई सोधे–“के छोरा हुन्छ डाक्टरले भनेका हुन् र ?”
होइन डाक्टरले त केहि पनि भनेका छैनन् । तर यसपालि उनीहरुले छोरा पाउने सुत्र प्रयोग गरेका छन् । त्यसैले पक्का छोरा हुन्छ भन्नेमा उनीहरु ढुक्क छन् । दिदीको यो सहज जवाफ सुनेर म तीनछक परे ।
छोरा पाउनकै लागि भनेर वर्षेनी सन्तान जन्माएको, भाकल गरेको, भ्रुणको लिंग पहिचान गरि गर्भपतन गराएको कुरा आजकाल जताततै पढ्न पाईन्छ । सुनिन्छ । तर छोरो पाउने सुत्र र सुत्र प्रयोग गर्ने बिधिको कुरा मैले पहिलो पटक सुनेकी थिए । मनमा खुल्दुली लाग्यो, आखिर के रै छ त छोरा पाउने सुत्र ?
वैज्ञानिक रुपमै छोरा र छोरी पाउने सुत्र बनेको अहिलेसम्म कहि कतै पुष्टि भएको छैन । तर पनि यस्ता कुरामा मानिसको चासो धेरै छ । दिदीको कुराले मेरो पनि चासो बढायो । छोरा पाउने सुत्रबारे गुगलमा खोजी गरे ।
ओहो……. कति धेरै नतिजा…। छोरा पाउने केहि सुत्र आमाबुवाको जन्ममितिका आधारमा तयार गरिएका भेटिए । केहि सुत्रमा वर्ष, महिना, दिन अनि बार मिलाउनुपर्ने भेटियो । कतै महिलाको डिम्ब निष्कासनको पहिलो चरणमा यौनसम्बन्ध राख्नुपर्ने कुरा लेखिएको भेटियो । कुनैमा राशि त कुनैमा खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा । सुत्रहरु जताततै थिए । कुनै सुत्र सित्तै उपलब्ध थिए भने कुनै सुत्रका लागि पैसा तिर्नुपर्ने ।
परिवार र समाजले छोरालाई महत्व दिने गरेकै कारण पनि धेरै नेपाली महिला हिंसाको मारमा परेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरुप पछिल्लो समय फेरिदै गएका छन् । छोरा पाउने ग्यारेण्टि ठानेर बिना आधार सुत्र प्रयोग गर्नु पनि महिला माथि हुने हिंसाकै एउटा रुप हो ।
त्यसमाथि मेरी दिदीकी साथी औसत महिलाभन्दा शिक्षित पनि हुन् । एक शिक्षित महिलाले नै छोरालाई महत्व दिएर यस्तो सुत्र प्रयोग गरेको सुनेर दुःख लाग्यो । उच्च माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा हासिल गरेकी अनि अस्पतालमै काम गर्ने मेरी दिदीकी साथी त एक उदाहरण मात्रै हुन् ।
छोरा पाउनकै लागि यस्ता सुत्रमाथि विश्वास गर्नेहरुको संख्या अझ धेरै हुन सक्छ । इन्टरनेटमा छ्यासछ्यास्ती पाइने यस्ता सुत्र प्रयोग गरेर कतिले पुत्र लाभ गरे भन्ने कुरा पनि खोजीको रोचक विषय हुनसक्छ ।
यदि दिदीकी साथीले यो पटक छोरा नै पाइन् भने पनि मेरो बिचारमा त्यो त केबल संयोग मात्र हुनेछ । किनकी छोरा र छोरी पाउने वास्तविक र वैज्ञानिक रुपले नै पुष्टि भएको सुत्र त यस्तो छ –
महिलाको एक्स क्रोमोजोम : पुरुषको वाइ क्रोमोजोम . छोरा महिलाको एक्स क्रोमोजोम : पुरुषको एक्स क्रोमोजोम . छोरी
छोरा र छोरी जन्मनुमा महिलाको कुनै दोष हुँदैन किनकी महिलासँग केवल एक्स क्रोमोजोम मात्र हुन्छ भने भ्रुणको लिंग निर्धारण गर्ने एक्स र वाइ दुवै क्रोमोजोम त पुरुषसँगै हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १९, २०७४ समय: १९:१८:२१